သီးနှံ (၇) မျိုးအား စံချိန်စံညွန်းများ သတ်မှတ်ရေးဆွဲမည်
Post byဇာလင်းသူ(AMIA) on Monday, January 28,2019
လက်ရှိတွင် သီးနှံမျိုးပေါင်း ၂၁ မျိုးကို မြန်မာစံချိန်စံညွန်း ရေးဆွဲသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျာထားသည်။ ဓာတ်ပုံ- ဖြိုးလွင်အောင်(AMIA)
၀ဥ၊ သီဟိုစေ့ဌ်၊ ချင်း(ဂျင်း)၊ ပဲပုပ်၊ မန်ကျဉ်း၊ နေကြာနှင့် ဓနိဖူး စသည့်သီးနှံ (၇) မျိုးကို မြန်မာစံချိန်စံညွန်း သတ်မှတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရ သည်။
လက်ရှိတွင် သီးနှံမျိုးပေါင်း ၂၁ မျိုးကို မြန်မာစံချိန်စံညွန်း ရေးဆွဲသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျာထားပြီး ကနဦး အနေဖြင့် သီးနှံ (၇) မျိုးအား စံချိန်စံညွန်း သတ်မှတ်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါ စံချိန်စံညွန်း သတ်မှတ်ရေးဆွဲမှု လုပ် ငန်းများအတွက် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်းကာ စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံထုတ်ကုန် စံချိန်စံညွန်းရေးဆွဲ ရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်ဝေက ပြောသည်။
“ စံချိန်စံညွန်း ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ တစ်ခြားသော သီးနှံ တွေကိုလည်း စံချိန်စံညွန်း ရေးဆွဲပြီးတော့ အများပြည်သူ သဘောထား မှတ်ချက်တွေကို တောင်းခံထားပါ တယ် ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် နည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီမှ မြန်မာ့ဆန်နှင့် ပဲမျိုးအစား(အချို့) ၊ မြေပဲ၊ ဖရဲ၊ ထောပတ်သီး၊ ကျွဲ ကော၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကော်ဖီ၊ သခွားမွေး၊ ဒူးရင်းသီး၊ မင်းဂွတ်သီး၊ စသည့် သီးနှံများအား စံချိန်စံညွှန်း သတ် မှတ်နိုင်ရန် အများပြည်သူ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် နှမ်း၊ သရက်၊ နနွင်းတက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း စသည့်သီးနှံများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲ့များထံမှ သဘောထားမှတ်ချက်များကို တောင်းခံ ထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့လယ်ယာ ထွက်ကုန်များ စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်များသို့ ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ် ချရခြင်းနှင့်ယဉ်ပြိုင်မှု ဈေးကွက်အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့တောင်သူများနှင့် ကုန်သည်များအနေဖြင့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရာတွင် ရာသီဥတု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ခြင်း၊ သွင်းအားစု ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ သီးနှံ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ လိုအပ်နေခြင်း၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားနေခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ် လုပ်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ၊ ရိတ်သိမ်းမှု စနစ်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ လိုအပ် နေခြင်း၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နှင့် ဝယ်လိုအားအပေါ် မှီတည်နေရခြင်း၊ ပြည်ပသို့ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်း များ တင်ပို့ရာတွင် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်း မမှီခြင်းကြောင့် ၀ယ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်းခံရခြင်း စသည့်စိန်ခေါ်မှုများ ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။
၀ဥ၊ သီဟိုစေ့ဌ်၊ ခ်င်း(ဂ်င်း)၊ ပဲပုပ်၊ မန္က်ဉ်း၊ နေကြာနွင့် ဓနိဖူး စသည့်သီးနွံ (၇) မ်ိုးကျိုမန္မာစံခ်ိန္စံညြန်း သတ္မွတ်ရေးဆြဲ ဆောင်ရြက်သြားမည်ျဖစ်ကြောင်း စီးပြားရေးနွင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမွ သိရ သည်။
လက်ရွိတြင် သီးနွံမ်ိုးပေါင်း ၂၁ မ်ိုးကျိုမန္မာစံခ်ိန္စံညြန်း ရေးဆြဲသတ္မွတ္နိုင်ရန် လ်ာထားပြီး ကနဦး အေနျဖင့် သီးနွံ (၇) မ်ိုးအား စံခ်ိန္စံညြန်း သတ္မွတ်ရေးဆြဲသြားမည်ျဖစ္ကာ အဆိုပါ စံခ်ိန္စံညြန်း သတ္မွတ်ရေးဆြဲမှု လုပ် ငန်းမ်ားအတြက် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမွ ဦးဆောင်းကာ စိုက္ပ်ိုးရေး အျေခခံထုတ္ကုန် စံခ်ိန္စံညြန်းရေးဆြဲ ရေး နည်းပညာဆပ်က္မောတီကို ဖြဲ့စည်းထားကြောင်း စိုက္ပ်ိုးရေးဆိုင်ရာ အျေခခံနည်းပညာ ဆပ်က္မောတီ အတြင်းရေးမွူး ဦျးမင့်ဝေကျေပာသည်။
“ စံခ်ိန္စံညြန်း ရေးဆြဲနိုင္ဖို့ သက္ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနေတြနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရြက်နေတယ်။ တစ်ျခားသော သီးနွံ တြေကိုလည်း စံခ်ိန္စံညြန်း ရေးဆြဲပြီးတော့ အမ်ာျးပည်သူ သေဘာထား မွတ္ခ်က်တြေကို တောင်းခံထားပါ တယ် ” ဟု ၎င်းကျေပာသည်။
လက်ရွိတြင် နည်းပညာ ဆပ်က္မောတီမျွမန္မာ့ဆန္နွင့် ပဲမ်ိုးအစား(အခ်ို့) ၊ျေမပဲ၊ ဖရဲ၊ ထောပတ်သီး၊ ကြ်ဲ ကော၊ ငွက်ပေ်ာသီး၊ က္ဖောီ၊ သခြားမြေး၊ ဒူးရင်းသီး၊ မင်းဂြတ်သီး၊ စသည့် သီးနွံမ်ားအား စံခ်ိန္စံညွှန်း သတ် မွတ္နိုင်ရန် အမ်ာျးပည်သူ သေဘာထားမွတ္ခ်က် တောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအျပင် နွမ်း၊ သရက်၊ နနြင်းတက်၊ ကြက်သြန္နီ၊ အေစ့ထုတ်ျေပာင်း စသည့်သီးနွံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညွှန်းမ်ားကို သတ္မွတ်ရေးဆြဲထားပြီး သက္ဆိုင်ရာဌာနမ်ား၊ အသင်းအဖြဲ့မ်ားထံမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို တောင်းခံ ထားပျြီဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
ျမန္မာ့လယ်ယာ ထြက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံညွှန်ျးပည့်မျီခင်ျးဖင့် နိုင်ငံတကာ စေ်းကြက္မ်ားသို့ ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ် ခ်ရျခင်းနွင့်ယဉ်ပြိုင္မှု စေ်းကြက်အတြက် အေထာက်အပံျ့ဖစ္လာမည်ျဖစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရျွိမန္မာ့တောင်သူမ်ားနွင့် ကုန်သည္မ်ားအေနျဖင့် သီးနွံမ်ား စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ် တင္ပို့ရာတြင် ရာသီဥတု၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ္မ်ား က်ရောက်ျခင်း၊ သြင်းအားစု ကုန္က်စရိတ်ျမင့်မာျးခင်း၊ သီးနွံ မ်ိုးကောင်းမ်ိုးသန့်မ်ား လိုအပ်နျေခင်း၊ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မှု ကုန္က်စရိတ္မ်ာျးမင့်မားနျေခင်း၊ အရည်အေသြျးမင့် ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ် လုပ္နိုင္မှု နည်းပါျးခင်း၊ ခေတ္မီစိုက္ပ်ိုးရေး နည်းစနစ္မ်ား၊ ရိတ်သိမ်းမှု စနစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မှုစနစ္မ်ား လိုအပ် နျေခင်း၊ နိုင်ငံတကာဈေးကြက္နွင့် ဝယ္လိုအားအေပါ် မွီတည်နေရျခင်း၊ျပည္ပသို့ လယ်ယာထြက္ကုန် ပစ္စည်း မ်ား တင္ပို့ရာတြင် အရည်အေသြး စံခ်ိန္စံညြန်း မမျွီခင်းကြောင့် ၀ယ်ယူမှု ရပ္ဆိုင်းခံရျခင်း စသည့်စိန်ခေါ်မှုမ်ား ကို ရင္ဆိုင်ကြုံတြေ့နေရသည်။
I cannot read due to Myanmar front. Moment you send Seed section is very nice for me, thanks much your sharing. I'm interest in this section seeds and more information share. Like that seed production, Seed treatment, hybrid seed and traditional etc... Thanks agaig to you.
by Myat Myat Win at January 28 2019
by at January 28 2019